look: winXP in USB - MYSTERY ZILLION
look: winXP in USB
June 2008 edited November 2008 in Windows XP
အားလုံး မင်္ဂလုံး ပါခင်ဗျာ
ယူအက်စ်ဘီကနေ အလုပ်လုပ်တဲ့ ၀င်းဒိုးတခုလောက်ရှာပေးပါလား
Live (Bert PE) တို့လိုမဟုတ်ဘဲ တကယ့်၀င်းဒိုးစ်လို သုံးလို့ရတာမျိုးလေ
Ever want to boot up into Windows XP viaaUSB memory key? Well, now you canГўв‚¬В¦
Also go to your BIOS setting and change the BOOT sequence. Removable drive or something should be at the top then try to reboot your PC.
အသုံးတည့်မတည့်တော့မတိ၀ူး... တည့်ရင် ဒီမှာ သွားဆွဲပါ...
Rapidshare Link ဖြစ်နေလို့ အခက်အခဲရှိရင် Mr DBA ကို အပူကပ်ကြည့်ပါ....
( အရောက်ပို့နေပါသည်.... )
အရောက်ပို့သူဂျီးရေ့ ... ရပြီဒီမှာ http://www.mediafire.com/?1lwte9ms4ds
ဒီ e-book လေးဖတ်ကြည့်မလား
ကျတော်တော့ ဒေါင်းထားပြီးပြီ ။ :67::67::67:
ကျွန်တော် ဒေါင်းတာ မရဘူးဗျ......ဖြစ်နိုင်ရင် တခြားဆိုက်နဲ့(:68:..rapid မပါဘူးနော်...) ပြန်တင်ပေးပါလား.......
Window XP မှာ ..ရှိပြီးသားဆော့၀ဲလ်တွေလည်းမဖျက်နိုင်အောင်....နောက်ထပ်လည်းဆော့၀ဲလ်အသစ်တွေထည့်လို့မရအောင်လုပ်ချင်တယ်ပါတယ်..............
shin wrote: »
You can be use DeepFreeze Software. Please detail to admins. Hee...hee...
အနော် pdf ဖိုင်ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်...
Down ပြီးသွားပါပြီ (152 MB) ရှိတယ်.
thanks you very much indeed:):):)
can anyone add new softwares to winxp that boot from USB
e.g. antivirus software, error fixer etc..
Thanks to all the people that help to make this happen
အနော် ခုမတွေ.လို download ဆွဲတွားပြီ ။ thanks နော် ဦးဦး mrDBA
Copy "LiveXP.bat" & "INSTALLDIR" toafolder
Set source & destination directory ( ex. Source: C:\_XP\_INSTALLDIR\_, Destination: C:\_XP\_1\_ )
don,t forgive to give Enable USB boot in your bios:)
အနော်အမှားပါရင် ကိုကို ကြီး တို မမ ကြီး တို ပြင်ပေးနော် :77: